Notre-Dame Grenier waxaa loo yaqaan 'kaynta' oo waxay u gubatay sida mid. - New York Times - TELES RELAY
ACCUEIL » kale » Notre-Dame Grenier était connue sous le nom de «la forêt» et elle brûlait comme un seul. – New York Times
PARIS - Xarun aan saldhig u aheyn Notre-Dame de Paris, kooxdii ugu dambeysey ee maalintii ayaa la qabtay Isniintii Qorraxda Quduuska ah, markii ugu horreysay ee dabka ka kacay. Waxay ahayd 18h20, daqiiqado 25 ka hor inta albaabada alwaax culus loo qorsheeyay in ay xiraan maalinta martida.
Xaqiiqo ahaan, dalxiisayaal iyo xubno shaqaale ayaa la soo saaray, qofna wuxuu galay inuu hubiyo qaybta ugu nugul ee dhismaha dhexe. - qiiqa, shabakad daasadaha qoryaha hore loo yaqaan "kaynta" - laakiin wax dab ah ma helin, ayaa sheegay Talaadadii in xeer ilaaliyaha Paris, Rémy Heitz,
at 18h43. qaylo-dhaanta ayaa dhawaaqay. Waxay ahayd kaliya daqiiqado 23, laakiin markii ay ku soo noqdeen qiiqa, waxay caddaatay in ay haysteen dhibaato weyn: Waxay ahayd dab . Dhowaan, qayb ballaaran oo saqafka ah iyo fallaadhaha jilicsan ee kor ku xusan ayaa sidoo kale lagu qulqulay olol, oo ay ku rideen dabayl xoog badan.
Tababarka dabku wuxuu hadda ku jiraa baadhitaan xoogan Mas'uuliyiinta Faransiiska ah, kuwaas oo ula dagaallama musiibada illaa iyo markii ay dhacdo shil.
Waxaa jira waxyaabo badan si ay u bartaan. Laakiin durbadiiba waxaa cad in Notre Dame, in dhaxal ahaan ugu dhiibno of France, baahnaydeen in nidaamkan aasaasiga ah ee looga baahan yahay ka hortagga dabka ee dhismayaasha casriga ah oo dheeraad ah ayaa la meeshoodii on cathedrals kale qadiimiga meelo kale oo Yurub.
walxaha, sida dab-demiska ama nidaamka deminta dab-demiska ah, waxay ka maqnaayeen doorasho - si aan loogu beddelin qaabka loo yaqaan 'benchmark' ama in lagu soo saaro xadhig koronto ah oo loo tixgelinayo in ay khatar ka sareyso kirada kuwaas oo taageera saqafka hogaanka ah ee Notre-Dame.
oo ah diidmo nidaamsan oo lagu soo saaro wax koronto ah "gudaha" kaynta "sababtoo ah khatarta, ayuu yiri Pierre Housieaux, oo madax ka ah Ururka Taariikhda Paris. "Qof walba wuu ogaa in qiiqa uu yahay qaybta ugu jaban."
Qaar ka mid ah go'aanadan waxaa loogu yeeraa su'aasha sababtoo ah masiibo ku dhacday burburinta dhismo qaali ah oo qaali ah oo loo yaqaan 'Gothic architecture' ah oo caalamka ka baxsan oo ka tagay wadnaha Paris.
"Nidaamka ogaanshaha dabka ayaa jiray, ma ahan qaybo dab-damis ah," ayuu yiri Jacques Chanut, madaxweynaha xiriirka Faransiiska ee dhismaha iyadoo la tixraacayo dhismayaasha sida caadiga ah loo isticmaalo meelo kale oo ay ku jiraan flambe. "Tani waxay tusaale u tahay wax aan u baahannahay inaan ka fekerno berri."
Si kastaba ha noqotee, waxa ay ahayd markii dabku ka kacay dabka iyo saqafka iyo dhismaha alwaaxa gudaha gudaha. Foornada ololka ayaa magaaladu ay ka dhigtay sida shumaca Rooma ilaa ay qarxisay, burburtay inta u dhaxaysa saqafka iyo kaniisadda.
Iyada oo gubashada dhismayaasha sare waxay ku dhufteen dabaqa dhismaha cathedral, qalabka guryaha ayaa sidoo kale dab qabsaday.
Dab-bakhtiiyayaashu waxay geysteen robot oo ku qalabeeysan taangiyada tufaaxa ah iyo kamarad si loogu dhejiyo tuubooyinka kakarta oo ay biyaha u maraan ololka. Dab-damiyayaasha ayaa sidoo kale isticmaala dayuuradaha diyaaradaha si ay fikrad uga helaan, oo ay ku jiraan sawirro dab-damis, jahannamo.
Dab-bakhtiiyeyaasha ayaa laga helaa farshaxanno aan la isticmaali karin, oo ay ku jiraan shumaca, muraayadaha, alaabta guriga iyo diinta diineed sida maryaha dharka leh ee la xiriira St. Louis. waa taajkii qodxan ee ku xidhan Ciise. Duqa magaalada Anne Hidalgo ayaa sharraxay markii ay arkeen in ay ka iibsadeen khasnado gacmeed oo gacanta ku jira silsilad aadane.
Laakiin marka maqnaanshaha tallaabooyinka ka-hortagga dabka ee cathedral, dab-demiyeyaasha waxay sameyn karaan wax badan oo keliya.
nabadgelyo ayaa u oggolaatay in dabku si dhakhso ah u faafo, "ayuu yiri Jean-Michel Leniaud, oo ah agaasimihii hore ee Ecole Nationale des Chartes, oo ah machad jaamacadeed oo Faransiis ah oo ku takhasusay sayniska isagoo adeegsanaya shaqada taariikhiga ah. "Haddii ay jiraan rusheeyaha meel kasta, waxay noqon laheyd mid ka duwan, laakiin ma jirin wax."
Leniaud, kuwaas on Tuesday booqday gudaha ee Notre Dame, ayaa sheegay in gobolka, taasoo leh iyo haysaa katedraalka, hirgelinaayo xeerarka bedbaadada dab dhismayaasha oo dhan, laakiin "mararka qaarkood waxay noqon kartaa wax adag in la codsado ".
Taas bedelkeed, tani waxay noqon kartaa gaar ahaan kiisaska qaar ka mid ah dhismayaasha ugu qaalisan. "Waxaan mar walba ka xishooneynay inaan qaabeynta dhismaha," ayuu yiri Leniaud.
Mid ka mid ah sababaha dabka loo xaaqay bannaanka bannaanka saqafka ayaa ah caqabadaha hortaagan, mararka qaarkoodna loo yaqaan "firewalls", si ay u dayriyaan dabka illaa dab-demiyeyaasha ay iman karaan, Jim ayaa yiri. Lygate, booqashada baaritaanka dabka ee Jaamacadda Edinburgh. Sababtan awgeed, ayuu yiri, in caqabadaha noocaas ah si sharci ah looga baahan yahay dhismayaal isku mid ah oo ku yaal Britain.
Tani macnaheedu maahan in dab-demiyeyaasha Paris aysan u diyaar garoobin masiibo dhici karta. Daraasiin ayaa si joogta ah loogu tababarey xaalad deg deg ah oo ka jirta Notre-Dame. Tani waxay caddaynaysaa lagama maarmaanka u ah ilaalinta hanti badan.
"Anagu ma dhaqaaqno qorshe la'aan," ayuu yiri Gabriel Plus, afhayeenka Paris Fire Department. "Waan ognahay kaniisadda. Sidaa daraadeed, waxaan ognahay waxa la sameynayo marka ay taasi dhacdo, waxaan ognahay, tusaale ahaan, inaanu doonayno inaan doonnida saarno Sein si dhakhso ah si aan u soo saaro tiro badan oo biyo ah. "
Ku saabsan dabdemiyeyaasha 500 ayaa ka jawaabey wicitaanada, qaar ka mid ah iyaga oo geynaya tuubooyin. oo dab ku qabsada. 100 waxay diiradda saarayaan dadaalladooda ku aaddan ilaalinta dhaqaalahooda diinta iyo dhaqanka, ayuu yiri Mr Plus.
"Markii aan ogaanay in saqafka qayb ahaan lumi doono, waxaan rabnay inaan dabka ka joojinno labada xargo, si loo yareeyo burburka."
Laurent Nuñez, wasiirka arimaha gudaha Faransiiska, ayaa sheegay in qiyaastii 20 dab-demiyeey ay naftooda halis galiyeen iyagoo soo galaya miyarada si ay ula dagaallamaan dabka, "taas oo badbaadisay dhismaha."
"Intii lagu jiray daqiiqado 15, saacad badhkeed, waxay u egtahay labada siyaabood," ayuu yiri.
Khatarta dab-bakhti ah ee kaabayaasha caaga ah ayaa si wanaagsan loo yaqaan.
"Xarunta kiniisadda waxaan haynaa bilayska dabka," Mgr. Patrick Chauvet, oo ah royal of the cathedral, ayaa sheegay Talaadadii at xarunta raadiyaha France Inter . "Saddex jeer maalintii, waxay ku fuulaan saqafka qoryaha si ay u sameeyaan qiimeyn."
Notre-Dame waxa uu dab kiciyay dabka, oo maalin walba la soo dhigay boosteejo ku taal dhulka dhismaha, iyo sidoo kale ilaaliye ammaan. ayuu yidhi Andre Finot, afhayeenka xarunta kaniisadda. Haddii uu dhaco digniin, dab-demisku wuxuu u diri doonaa sarkaalka amniga goobta uu ku dhacay.
Sanadkii la soo dhaafay, dab-demiyeyaasha Paris waxay u diyaargaroobeen labo tababareed oo aan ka helin Notre-Dame oo loogu talagalay ilaalinta qalabyada iyo shaqada farshaxanka, ayuu yiri Mr. Plus.
Lt. Col. José Vaz de Matos, oo mas'uul ka ah baaritaanka mucaaradka qaranka ee Faransiiska, ayaa yiri: "Qaar badan oo lacag ururin ah ayaa la badbaadiyey lana sugayay." Laakiin waxyaabo waaweyn, "qaar ka mid ah kuwaas oo ay saameeyeen dabka ", Ku dhex jirey gudaha
"Waqtigan, ma soo diri karno kooxaheena si ay u soo kabtaan," ayuu yiri.
Dhamaadka habeenkii, inta badan dhaawicii hore ayaa loo qabtay. Laakiin ma ahayn ilaa subaxnimadii Talaadadii in dab-demiyeyaasha ay ku dhawaaqeen in dabka la demiyay iyo dab-demiyayaashu ay maalin kasta kormeerayeen goobaha kulul iyo sii wadaan inay ka saaraan qiimaha dhismaha.
Franck Riester, Wasiirka Dhaqanka, ayaa Talaadadii sheegay in cathedral daaqadaha qaaliga ah ee caanka ah aysan muuqan in ay waxyeello soo gaartay. Laakiin waxaa jiray saddex godood oo waaweyn oo saqafka ah, mid ka mid ah ayaa sababay burburkii xawaaraha.
Ka hor inta dabka, shaqada dib u soo celinta bilaabay iyo inta dhismaha la Fiido ee dhismaha, kuwaas oo weli ka hooseeyeen dhismaha. Julien Le keenshali, maamulaha guud ee Le keenshali Brothers, shirkadda maamusha munaaraddii cathedral, ayaa u sheegay saxaafadda in shaqaalaha 12 ka shaqeeya goobta, laakiin halkaas ma joogin waqti ka mid ah dab.
Khabiiradu waxay yiraahdaan dib u soo celinta, oo inta badan ku lug leh kiimikooyinka dabaysha iyo qalabka korontada, had iyo jeer waa halis dabka, sida xadhkaha korontada.
Housieaux, oo ah madaxweynaha taariikhda taariikhda deenishka ee Paris, ayaa sheegay in tobaneeyo sano ee la soo dhaafay, dabka la xidhiidha hawlaha dib u soo celinta ay burburiyeen hoolka magaalada ee La Rochelle iyo hotel Lambert ee ku yaala Saint -Louis, mid ka mid ah jasiiradaha yaryar ee Seine ee Paris.
Mashruuca Dib-u-dhiska ee Notre-Dame waxaa loogu talagalay in lagu xoojiyo xawaaraha iyo dayac-tirka qaar ka mid ah garabka cawska ah, ayuu yiri Olivier de Chalus, injineernimada dhismaha iyo hagaha iskaa wax u qabso ee cathedral. Wuxuu qeexay dhismaha hoostiisa sida "dahabiga ah ee cathedral, shaqada runta ah ee farshaxanka aan la heli karin dad badan".
Laakiin khubaradu waxay yiraahdaan maylaha, badanaa taariikhda dhismaha cathedral ee qarnigii laba iyo tobnaad ee sannadka, ayaa noqday mid aad u qoyan markii ay sii weynaayeen.
khubaro The falanqeeyaan doonaa dhismaha si ay u qiimeeyaan halista ah ee burburka, ayaa sheegay in. Si xasilin, waxa laga yaabaa inay ka saari doonaan dhismaha dhaawacan, dhiseysa kuwo cusub oo ay qaadaan tallaabooyin si ay u ilaaliyaan malaastiisa oo u dhexeeya dhagaxyo, kuwaas oo laga yaabo in lagu wiiqay dab, nabaad by roobka.
Nunez, Wasiirka Arrimaha Gudaha ku xigeenka, ayaa sheegay in halka "guud ahaan, qaabka heysta", kormeerayaasha loo aqoonsado "dayacanka" in saqafka vaulted iyo Gable ah transept xagga woqooyi. Waxa uu sheegay in shan ka mid ah dhismayaasha Rue du Cloitre ah, kaas oo ay maamusho ay weheliyaan qarkiisa waqooyi ee Cathedral ee, ayaa la daadgureeyay inta lagu guda jiro 48 saacadood taxadar ahaan.
Heitz ayaa sheegay in ku dhowaad baarayaasha 50 ay u shaqaynayeen si ay u helaan sababta keentay dabka, laakiin wuxuu ka digay in baaritaanka uu noqon doono mid dheer oo adag. Ilaa hadda, ayuu yiri, malaynayaa in uu ahaa shil.
"Waxba marxaladahaani ma sheegayo ficil iskaa ah," ayuu yiri.
Video. Waa kuwan sida ay udubdhexaadiyuhu u badbaadin doonaan meeraha ka sameysan caag